Galaxy 20 Ultra na iPhone 11 Pro Max | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Foto na ụda
Samsung egosiputa nke mbụ nke nzọ ya na njedebe dị elu nke ụwa nke ekwentị mkpanaka na aka nke Ihe nkiri Galaxy Z site na nso Galaxy S20, nso nke nwere uzo ato. Mgbe ị na-azụ ahịa, ọ bụrụ na ị na-achọ ebe kachasị elu dị, n'ahịa taa, anyị na-achọta naanị nhọrọ abụọ nwere ike ịme: S20 Ultra na iPhone 11 Pro Max.
Anyị enweghị ike ịgụnye Huawei Mate 30 Pro site na Huawei, n'ihi na ọ naghị enye anyị ọrụ Google, yabụ nhọrọ ọ na-enye anyị n'ihe gbasara iji ya arụ ọrụ na-ebelata nke ukwuuỌ bụ ezie na enwere ike ịwụnye ndị a n'enweghị nsogbu ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmadụ niile nwere ihe ọmụma iji mee ya.
1 Galaxy S20 Ultra na iPhone 11 Pro Max
2 S20 Ultra screen na iPhone 11 Pro Max
3 Igwe foto na vidiyo
4 Ike, RAM na nchekwa
6 Kedu nke ka mma?
Galaxy S20 Ultra na iPhone 11 Pro Max
Zọ kachasị mfe iji nweta echiche nke ihe Galaxy S20 Ultra na iPhone 11 Pro Max na-enye anyị bụ site na tebụl, okpokoro ebe anyị nwere ike ngwa ngwa lee isi ihe eji mara nke ọ bụla nke ndị a ọnụ na na anyị gbarie n'okpuru.
Ihuenyo 6.9-anụ ọhịa AMOLED 6.5 inch OLED
Mkpebi 3.200 × 1.440 p 2.688 × 1.242 p
Nhazi Snapdragon 865 / Exynos 990 A13 Bionic
Ebe nchekwa RAM 16 GB 4GB
Nchekwa ime 128-512 GB UFS 3.0 64-128-256 GB
Rear igwefoto 12 mpx obosara / TOF sensor / 108 mpx isi / 48 mpx telephoto zoom 10x ngwa anya na 100x ngwakọ 12 mpx obosara / 12 mpx ultra wide / 12 mpx telephoto 2x mbugharị
Igwe n'ihu 40 mpx 12 mpx
Usoro njikwa A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0 iOS 13
Batrị 5.000 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ 3.969 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Njikọ 5G - Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C 4G - Bluetooth 5.0 - Wifi 6 - Njikọ ọkụ
Nche Mkpịsị aka mmetụta n'okpuru ihuenyo Nje ID
Ahịa site na euro 1.359 (128 GB) site na euro 1.259 (64 GB)
S20 Ultra screen na iPhone 11 Pro Max
Mgbe iPhone 11 Pro Max na-aga n'ihu ịkụ nzọ, maka afọ nke atọ na-aga n'ihu na ọhụụ iji jikọta usoro nyocha ihu, Samsung na-enye anyị ahọrọla ịgbanwe ọnọdụ nke igwefoto dị n'ihu, na-ebugharị ya n'etiti etiti ihuenyo (na S10 ọ nọ n'akụkụ aka nri).
Ihuenyo iPhone ruru 6,5 sentimita asatọ na mkpebi nke ụdị 2.688 × 1242 OLED (nke Samsung rụpụtara) ma nwee ume ume nke 60 Hz. Maka akụkụ ya, S20 Ultra, na-enye anyị nnukwu ihuenyo nke 6,9, 3.200 sentimita asatọ, na 1.440 × XNUMX mkpebi na ume ọhụrụ nke 120 Hz.
Igwe foto na vidiyo
IPhone 11 Pro Max abụrụla onye mbụ Apple ga-eji mejuputa mbara igwe, si otú a na-agbakwunye na anya abụọ nke ọ na-enye XS MAX na-eme mkpokọta atọ:
12 mpx ultra wide akụkụ
12 mpx telephoto lens nwere mbugharị ngwa anya 2x
IPhone 11 Max Pro vidiyo ndekọ vidiyo nwere oke 4K na 60fps
Samsung, n'aka nke ọzọ, na-etinyekwa ihe Igwefoto 3 na Galaxy S20 Ultra ma tinye ihe mmetụta TOF iji tụọ omimi. Isi ihe mmetụta rute 108 mpx, obosara sara mbara bụ 12 mpx na telephoto bụ 48 mpx nke na-ejikọ ntinye anya 10x na mbugharị ngwugwu 100x. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka vidiyo, usoro Galaxy S20 niile na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na ogo 8k, ikekwe na 30 fps ebe akọwapụtabeghị data a.
Ike, RAM na nchekwa
N'ime iPhone 11 Pro Max, anyị na-ahụ A13 Bionic processor, otu ihe nhazi ahụ anyị nwekwara ike ịchọta na iPhone 11 Pro na iPhone 11. Samsung na-ejikwa otu nhazi ahụ na ụdị niile ahụ bụ akụkụ nke usoro ọhụrụ ahụ. 20, ma iche dị ka kọntinent ebe a na-ere ya.
Ọ bụ ezie na maka America na China, ọ na-eji Snapdragon 865 nke Qualcomm, maka Europe na mba ndị ọzọ, Samsung na-etinye Exynos 990, nke ụlọ ọrụ Korea rụpụtara. Na tiori, ndi nhazi abuo n’enye oru yiri nke a, n’agbanyeghi Qualcomm’s processor sỌ na-enyekarị arụmọrụ ka mma n'ihe gbasara oriri batrị.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere RAM, iPhone 11 Pro Max nwere 4 GB, ihe karịrị ezuru ekele na mwekota na iOS 13, ndị ọhụrụ mbipute nke iOS dị taa. Samsung, maka nke ya, na-enye anyị nhazi RAM dị iche iche dabere na ụdị ahụ bụ 4G ma ọ bụ 5G. Ọ bụ ezie na S20 na S20 Pro 4G ụdị 8 GB nke RAM na-achịkwa, ụdị 5G na-esonyere 12 GB nke RAM.
Samsung Galaxy S20 Ultra dị naanị na nsụgharị 5G ma soro ya na 16 GB nke RAM. Apple ahapụbeghị enweghị iPhone na teknụzụ 5G.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nchekwa, Apple na-egosi ọzọ, otu afọ, na ọ dị oke ụkọ na usoro nchekwa, ebe ọ bụ na ụdị nke mbụ malitere site na 64 GB, na nsụgharị nke 256 na 512 GB. Samsung, dị ka afọ gara aga, na-enye anyị ụdị ntọala nke 128 GB, nwere nhọrọ na nke ọzọ nke 512 GB na ohere nke ịgbasa ohere nchekwa na iji kaadi microSD, nhọrọ nke iPhone 11 Pro Max anaghị enye.
Dị ọnụ ala dị ọnụ ala nke iPhone 11 Pro Max akụkụ nke 1.259 euro na ọ na-enye anyị 64 GB nchekwa, ebe Galaxy S20 Ultra, na ụdị ya dị ọnụ ala, akụkụ nke 128 GB maka euro 1.359.
Ebumnuche abụọ ahụ dị egwu ma nye anyị ogo ma na ngalaba foto na vidiyo yana yana metụtara ike na arụmọrụ nke anyị na-agaghị achọ ịchọta na ọdụ ndị ọzọ. Mgbe ị na-ekpebi otu ọdụ ma ọ bụ ọzọ, anyi aghaghi ileba anya n’onu ohia na anyi kere n'ụlọ anyi.
Ọ bụrụ na ndị ezinụlọ gị na-eji gam akporo, o nwere ike ịbụ na ị nwekwara ọkà okwu amamihe sitere na Google ma ọ bụ Amazon. N'okwu ndị a, nhọrọ kachasị mma bụ ụdị Samsung. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iPhone kachasị na ụlọ gị yana n'etiti ndị enyi gị, o doro anya na nhọrọ kachasị mma iji nọrọ n'ime gburugburu ahụ bụ iPhone 11 Pro Max. Họrọ ọnụ na ịhọrọ, n'ezie ị gaghị enwe mmechuihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Galaxy 20 Ultra na iPhone 11 Pro Max
Otu esi edozi ulo gi n'eme obere ego